यौन जीवनमा स्मार्ट कन्डम » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९ मा प्रकाशित !
२३ फागुन, आफ्नो यौन जीवनको सम्पूर्ण तथ्याङ्क राख्ने र यौन सम्पर्क गर्दा खर्च भएको ऊर्जा हिसाब गर्ने स्मार्ट कन्डम अब पुरुषका लागि उपलब्ध भएको छ । आई–कोन स्मार्ट कन्डमले यौन क्रियाकलापबाट सर्ने रोगहरूबाट समेत सुरक्षा दिने छ । आविष्कार गर्नेहरूले सन २०१७ मै स्मार्ट कन्डम उपलब्ध हुने जानकारी दिएका छन ।
स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने अन्य उपकरण सरह यसले पनि नानो चिप र ब्ल्युटुथ प्रविधिद्वारा तथ्याङ्कलाई स्मार्टफोनको अप्लिकेसनमा पठाउन सक्छ । आई–कोन वास्तविक कन्डम चाहिँ होइन । यो एउटा रिङ हो जसलाई कन्डमको मुनि राख्नु पर्छ । कैयौँपटक आई–कोन उपयोग गर्न मिल्छ । कम्पनीले भनेको छ– यसलाई प्रयोग गर्दा असजिलो हुँदैन, यो जलप्रतिरोधि र हल्का पनि छ, आई–कोन प्रयोग गर्नका लागि तपाईं कुनै पनि कन्डम रोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई उत्तिकै आनन्द महसुस हुने छ । आई–कोन स्मार्ट कन्डमका लागि ९० हजारभन्दा बढी मानिसले अग्रिम अनुरोध गरिसकेका छन । सन २०१७ को अन्ततिर बजारमा आउने आई–कोन स्मार्ट कन्डमको मूल्य ५९।५९ पाउन्ड अर्थात करिब आठ हजार रुपियाँ राखिएको छ । ब्रिटिस कन्डमले यस आई–कोन स्मार्ट कन्डमलाई बजारमा ल्याउने छ । आई–कोन स्मार्ट कन्डममा माइक्रो युएसबी पोर्टसमेत राखिएकाले यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ र एकपटक चार्ज गरेमा यसले छदेखि आठ घण्टा काम गर्दछ ।
PREVIOUS POST Previous post: मधेसी मोर्चाको बन्दले एमालेको सभा बिथोल्यो
NEXT POST Next post: बेरोजगारी समस्या समाधानका लागी कृषि व्यवसायीकरणमा जोड​
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, फाल्गुन २३, २०७३ ०६:४९